ZayYarHlaing: January 2010
ဖုန်းကတ်ကလေးကို သွားဝယ်လိုက်သည်.. ပြီးတော့ ဂဏန်းရှစ်လုံးနှိပ်ရသည်။
ပြီးတော့ ဘာသာစကားရွေးရပြန်သည်။ ပြီးတော့ဂဏန်းပေါင်းများစွာထပ်နှိပ်ရပြန်သည်။
U have 10 $ remaining ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယေက်အသံကိုစတင်ကြားရသည်။
ပြီးမှအိမ်က ဖုန်းနံပါတ်လေးကို နှိပ်ခွင့်ရသည်.. 951+…. .. .. …. ဂဏန်းများနှိပ်ပြီးသည်နှင့် ...
U have 26 mins remaining for this call ဆိုပြီးကြားရပြန်သည်။
သြော် ဒုက္ခပါလား.. ဖုန်းကဖြင့် ၀င်သည် မ၀င်သည် မသိသေး..
ဖုန်းကတ်လေး တစ်ခုကို S$ 8.50 ပေးရသည်.. ထိုကတ်လေးဖြင့် ထိုင်းကိုဆိုလျှင် ၁ နာရီကျော် စကားပြောလို့ရသည်.. အိန္ဒိယကိုတော့ မိနစ် ၉၀ ရသည်ဟုဆိုသည်.. ကျွန်တော်သိသမျှ အာရှနိုင်ငံအားလုံးနီးပါး မိနစ် 100 ဝန်းကျင်အသုံးပြုနိူင်ကြတာတွေ့ရသည်..
မြန်မာပြည်ကိုခေါ်လျှင်တော့ ဖုန်းကတ်တစ်ကတ်ကို ၂၆ မိနစ်ပဲ အသုံးပြုလို့ရသည်..
ဒါတောင် ဖုန်းခေါ်တာလာမကိုင်လို့ ကြာနေလျှင် ထပ်ဖြတ်.. ဖုန်းမ၀င်လျှင် မအားလျှင်ဖြတ်..
လူကြီးမင်းနဲ့ တိုးရင်ထပ်ဖြတ် ... ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပဆိုရင်လဲဖြတ် ...
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော Phone သည် တတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါရှင် ..ဆိုတာမျိုးကပါသေး။
မသိရင်ကိုကပဲ မရှိတဲ့ Phone No ကိုရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ခေါ်နေသလိုလို ..
ဖြတ် .. ဖြတ် ... ဖြတ် ...
တကယ်တမ်း အိမ်က ဖုန်းကိုင်ပြီဆိုလျှင် စကားပြောချိန်က ၁၅ မိနစ် စာသာကျန်သည်.. အမေ့အသံ အဖေ့အသံ ကြားရရုံလေးတင်..
ချစ်သူ့ အသံကိုကြားရရုံလေးတင် ...
ဘာစကားမှ သေခြာမပြောအားပါ.. မလွယ်ဘူးနော်..
Phone card တစ်ခုလုံးခေါ်နေတာနဲ့ ပဲကုန်သွားပြီး
" လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော Phone သည် .... "
စိတ်ပါလျှင်လူကြီးမင်း မကလေးနှင့် ကလေးပါမွေးလို့ ရနိုင်သည်။
ထို့ ကြောင့် ...
ကျွန်တော် မောင်ဇေယျာလှိုင်လေးသည် ...
ချစ်သူနဲ့ တကွ၊ မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမ ...
နားလည်ပေးကြခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူကြပါကုန်လော့ ... ။
အဲဒီကို Setting ထဲက Labs ကနေသွားရင်ရပါတယ်။ ပြီးရင် သုံးချင်တာလေးတွေကို Enable လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေနေတာတွေက -
> Forgotten Attachment Detector >> ဒါက စာထဲမှာ Attached is the document for blah blah blah ဘာညာရေးထားပြီး ဖိုင် ထည့်ဖို့မေ့သွားရင် ဖိုင်မပါဘူးဆိုပြီး သတိပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ သတိထားရမှာက Attached ဆိုတဲ့ စာလုံး စာကိုယ်ထဲမှာ မပါရင်တော့ သူ detect မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
> Undo Send >> ဒါကတော့ ပို့လိုက်ပြီးတော့မှ စာမှာ အမှားပါတာတို့ လိုသွားတာတို့ မပြောသင့်တာတွေ ပြောလိုက်မိတာတို့ဆိုရင် ပြန်ပြီး undo လုပ်တာ။ သူက ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀ စက္ကန့် အတွင်း ပြန်ပြင်ခွင့်ရှိတယ်။ Message ကို ပို့ပြီးတာနဲ့ အပေါ်မှာ Undo လုပ်မလားလို့ မေးလိမ့်မယ်။ လုပ်မယ်ဆို ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ခုနက မပို့ရသေးတဲ့ အခြေအနေကို ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပို့ပြီးပြီးချင်း refresh တို့ inbox တို့ ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက် သုံးလို့မရပါဘူး အတည်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါက ရုံးမှာ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ စာနဲ့ attachment နဲ့က တလွဲစီဖြစ်သွားတာ။ တော်သေးတယ်။ Undo ပြန်လုပ်လိုက်လို့။း)
> Don't Forget Bob >> ဒါက ကိုယ်ပို့နေကျသူတွေကို ဂျီမေးကမှတ်ထားပြီး နောက်အခေါက်တွေ ပို့တဲ့အခါ ဒီလူကျန်သေးလား ဟိုလူကိုရော ပို့ဦးမလားဆိုပြီး သတိပေးတာလေးပါ။ စဉ်းလည်း မစဉ်းစားရတော့ဘူး ရိုက်လည်းမရိုက်ရတော့ဘဲ သူပြလာတာလေးတွေ ကလစ်နှိပ်ရုံပဲဆိုတော့ လက်ရော ဦးနှောက်ရော သက်သာတာပေါ့။
> Got the wrong Bob >> ဒါကတော့ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ နာမည်က နာမည်ခပ်ဆင်ဆင် တစ်ယောက်နဲ့ မှားနေလားဆိုပြီး သတိပေးပါတယ်။
> Insert the image >> ဒါကတော့ ပုံတွေကို သက်သက် attach မလုပ်ဘဲ စာကိုယ်ထဲမှာ တစ်ခါတည်း ထည့်တာပါ။ ပုံတစ်ပုံ ချင်းစီရဲ့ အောက်မှာ စာတွေ ရေးလို့ရတာပေါ့။
> Google Calendar >> ဒါကတော့ ပြက္ခဒိန် အသေးစားလေး။
> Google Documents >> ဒါကတော့ google documents အနှစ်ချုပ်ပေါ့။
Sender Time >> ဒါကတော့ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပဲ။
ကိုယ့်ဆီကို ဘယ်သူက ဘယ်နေရာက ပို့တယ်ဆိုတာ သိနိုင်တော့ Spam လား Phishing
လား ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ အဲဒီ လုပ်ဆောင်ချက်ကို
ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Mail Header မှာရှိတဲ့ Show Details ကို
နှိပ်လိုက်ရင် Sender Timezone (--GMT) နဲ့ အခု ဘယ်အချိန်ရှိပြီဆိုတာလည်း
ပြောထားတယ်။ ဂျီမေးလ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်ကို မေးလ်ပို့လာတဲ့သူကို
(အလုပ်၊ တခြား၊ များသောအားဖြင့် ရေမြေခြား အလုပ်) ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်
ဖုန်းဆက်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် သူအိပ်ချိန်လား အလုပ်ချိန်လား
အဲဒီ Labs တွေအပြင် တခြားအများကြီးရှိသေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတာတွေ ရှိဦးမှာပါ။
အခုအောက်မှာပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးတွေ သုံးပြီး ပို့လို့ရနေပါပြီ။
လက်ရှိမှာ လူတော်တော်များများ သုံး ကြ တဲ့
DivShare or YouSendIt လို နောက်ထပ် ဆိုဒ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ သုံးကြည့်လိုက်နော်
ကဲ…အားလုံးရဲ့ မီးမြေခွေးတွေကို အမြန်နှုန်း(၂ )ဆ တင်ပြီးပြေးခိုင်းဖို့အတွက် အောက်ပါ နည်းလမ်းလေးတွေ နဲ့ စလိုက်ကြရအောင်။
အထက်ပါနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မီးမြေခွေး(၂ ) ဆမက မြန်သွားတာကတော့ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို အထက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်းစမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Normal နဲ့HDR ပါ။
မျှော်သာမျှော်ပေါ်မလာသူရေ ... စိမ်းကား။ မချစ်လို့ မုန်းလို့ ပုန်းပြီလား ?
" ရေထဲပဲခုန်ချလိုက်ရမှာလား ?
? ? ? ? ? "
Sg က Chinese Garden မှာပါ။
သူ့ Model နဲ့သူ့ camera man သူတို့ ဟာသူတို့ ရိုက်နေတာကို၊
ကျွန်တော် မောင်ဇေယျာလှိုင်လေးကမြင်မိလေတော့ကာ ...
အခုလို သူတို့ မသိအောင် အဝေးကနေခိုးပြီး
Nikkor 200mm Lens နဲ့snapshot လေးဆွဲပြစ်လိုက်တာပါ။
တစ်ကယ်ကို pure snapshot လေးပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဦးဆုံး စမ်းသပ်ထားတဲ့
HDR Image လေးနှစ်ခုပါ။
Chinese Garden မှာရိုက်ထားတာပါ။
တစ်ကယ်လင်မယားမဟုတ်ပါဘူး။ Sg က model နှစ်ယောက်ပါ။
ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့model လုပ်ပေးနေတာလို့ တော့ မထင်လိုက်ကြနဲ့ နော်။
ဘာအတွက်လဲတော့မသိပါဘူး။ သူတို့camera man တွေနဲ့ သူတို့ ပါ။
chinese garden မှာပါ။
ဘယ်ရမလဲ ဒီလိုအခွင့်အရေးကရခဲတော့ ...
ကျွန်တော်လဲအဝေးကနေ Nikkor 200 mm lens နဲ့ ရသလောက်လေး snapshot လှမ်းဆွဲလိုက်တာပေါ့။
အရမ်းအနီးကလဲသွားမရိုက်ရဲဘူးလေ၊ သိတယ်မလား။ ရှုတ်ကုန်မှာ ။
အဝေးကလဲဖြစ်၊ snapshot ကလဲဖြစ်၊ သူများ model ကိုမသိအောင်ခိုးရိုက်တာလဲဖြစ်သောကြောင့်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြတ်တော့အမြတ်ပဲပေါ့ဗျာ ... ။ ဟီး။
DOF ဆိုတာကတော့ Depth Of Field ကိုအတိုခေါ်လိုက်တာပါပဲ။
Depth Of Field ဆိုတာဘာလဲပြန်နွေးခြင်တယ်ဆို၇င်တော့၊
ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ What is aperture ? မှာပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါနော်။
အခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ portraits image တစ်ခုမှာ
မျက်နှာကို close up ရိုက်ယူပြီး DOF ဖမ်းတဲ့အခါ၊
မျက်နှာရဲ့ တစ်ချို့ အပိုင်းတွေက focus မိပြီး၊
တစ်ချို့ အပိုင်းတွေကတော့ out of focus ဖြစ်သွားတဲ့ ပြသနာကို
ကလေးငယ်ရဲ့ မျက်လုံးဟာ sharp ဖြစ်နေပြီး၊
နားရွက်နှင့် နှာခေါင်းကတော့ sharp မဖြစ်တာကိုတွေ့ ကြရမှာပါ။
aperture f/4 နဲ့ ရိုက်ယူထားတဲ့ large aperture DOF image လေးပါ။
ထိုကြောင့် ရလာဒ်က quite narrow DOF ဖြစ်နေပြီး၊
ဒီတော့ ဒီလို image မျိုးရိုက်ယူတဲ့အခါ swallow DOF / narrow DOF
သင့်၏ aperture ကို increase လုပ်ပေးရပါမည်။
ဆိုလိုသည်မှာ f/4 ဖြင့်ရိုက်ယူသောအခါ၊ လိုခြင်သလောက် focus မဖြစ်သဖြင့်၊
focus နေရာပိုမိုလာအောင် aperture ကို increase ၊
bigger number / smaller aperture setting ကိုပြောင်းပေးရပါမည်။
ထိုသို့ သင့်တော်သော aperture ကိုပြောင်းပေးနိုင်ရန် ...
မည်သည့် aperture size သည်သင်၏ lens ၊
aperture range ၏ဗဟို ဖြစ်သည်ကိုသိထားရန်လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပါ။
ထို့ မှသာ သင်၏ DOF ကိုလိုအပ်သည်အထိ increase လုပ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊
သင်၏ image ကလည်းပိုပြီး sharp ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
smaller aperture ကိုအသုံးပြုခြင်းဆိုသည်မှာ ...
သင်၏ lens ကို ပိုမိုနည်းစွာ ဖွင့်ပေးပြီး၊
light ကိုလည်းပိုမိုနဲစွာပဲဝင်ခွင့်ပေးသည်ဆိုတာကိုတော့သင်မေ့ထားလို့ မရပါ။
ထိုကြောင့်၊ ထိုကဲ့သို့ သောအခြေအနေမျိုးများတွင် :-
သင်၏ subject ကို light ပိုမိုရစေရန်ကြိုးစားပေးပါ။
စသည်ဖြင့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီး light ပိုမိုရလာစေရန်ပြုလုပ်ပါ။
ISO setting ကို increase လုပ်ပေးခြင်းလဲပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
moving subject များကိုသင်ရိုက်ယူသောအခါတွင်မူ၊
မည်မျှထိသာ shutter speed ကို decrease လုပ်နိုင်သည်ဆိုသော
limit ကရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ smaller aperture ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့၊
decrease shutter speed သည်
P.S သယ်ရင်းတို့ ကိုအရမ်းချစ်လွန်းလို့ ၊
ရှာတွေ့ ထားတဲ့ link ကလေးတစ်ခုကို Bonus ပေးလိုက်မယ်ဗျာ။
DOFMaster တဲ့။ အသုံးဝင်မယ်လို့ ယူဆမိတယ်ဗျာ။
camera အမျိုးအစား၊ Model ၊ အသုံးပြုတဲ့ lens ၊
ဘာဘာညာညာတွေနဲ့ တွက်လို့ ရတဲ့ Depth of Field Calculator လေးလဲပါတယ်ဗျာ။
သိပ်အများကြီးပြောတော့ဘူး။ ပေါ့သွားမှာစိုးလို့... ဟီး။
မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ချစ်နဲ့ တော့။
ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ တွေ့ တဲ့နေရာမှာ အတင်းကိုခေါ်ပြီး
coffee တိုက်။ သဘောတူသလားဟေ ... ။
ဖနောက်နဲ့ ပေါက် ... ပြီးတော့
ရေထဲပစ်ချလိုက်သလိုဖြစ်မှာကတော့ sure ပါပဲ။
( ခံရတဲ့သူကတော့ တော်တော်လေးကို ကျိ်န်ဆဲမှာပါ )
သူတို့ ကချမ်းသာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကငမွဲတွေဆိုတော့ ...
နောက်ဘဝမှပဲ ကျေးဇူးဆပ်ပါ့မယ် ... Kaspersky ရယ်။
Window7တုံးကလဲဒီလိုပဲပြောခဲ့တာဆိုတော့၊
ဒီတော့ ဒီနည်းကိုသုံးမဲ့သယ်ရင်းများရေ ...
Follow these Screenshot
1) . Cut off the Internet !! . THIS IS IMPORTANT!!!
I suggest u to power off the modem or Disconnect that Ethernet Cable
Then , delete the existing key (If any)
2) Open your Kaspersky 2010 product (Either KIS or KAV)
Then click on settings (Top right Corner).
Uncheck the "Enable protection" Check box
3) In the settings window itself , go to "Options"
And uncheck these two chack boxes
i) "Enable Self-Defense"
ii)"Disable External service control"
4) Goto Start>Run>Type "regedit"> OK.
Then on the right list , double click on "ProductStatus"
Then , in the "Value Data" Field . replace "Released" with "Beta" and click OK
5) Then Open Kaspersky 2010 Product .
Now , Check these check boxes :-
i)"Enable protection" (In "Protection" sub menu)
ii)"Enable Self-Defense" (In "Options" sub menu)
iii)"Disable External service control" (In "Options" sub menu)
6) Close the error message saying that "Protection is not running" .
This is just caz , u have not installed any key and the product is not registered also
THIS IS A MUST , IF U DONT RESTART , THIS TRICK WILL NOT WORK
8) Now , after restart , connect your internet first. ( need to use internet now )
Open Your Kaspersky product .
Then click on "License" (Somewhat in the middle in the bottom)
Click on "Activate new license"
then click on "Activate Beta License"
Thats is folks !!!!
Now , you got yourself an genuine 30 days key given by the kaspersky servers itself
What after the key gets blacklisted ??
This key will never get blacklisted caz this is very genuine
What after 30 days are complete ????
Nothing!! . Just click on Activate beta license and click on
Next . Thats it The kaspersky server will give u an
new 30 days genuine key .
movement blur ဆိုတာကတော့အနီးစပ်ဆုံးပြော၇၇င်၊
camera shutter ကဖွင့်လိုက်သောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း
သင်၏ subject ကိုသင်၏ camera ထဲတွင်မြင်နိုင်သော image ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေ၇ာတွင် shutter ကအတော်လေးပဲအေ၇းကြီးပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်သုံးလိုက်သော shutter speed က မြန်နေမည်ဆိုပါက၊
( ဥပမာ ... 1/4000th ofasecond )
သင်၏ image အား movement image တစ်ခုအဖြစ်မြင်တွေ့ နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
တကယ်လို့ သင်သုံးလိုက်သော shutter speed ကနှေးနေမည်ဆိုပါက၊
( ဥပမာ ...5 second )
subject ကအ၇မ်း move မဖြစ်နေသော်လည်း
သင်၏ image ဟာ blur အဖြစ်မြင်တွေ့ နိုင်မှာပါ။
How long should your shutter speed be?
ခရုတစ်ကောင်သွားနေတဲ့ အရှိန်နဲ့ပြိုင်ကားတစ်စီးသွားနေတဲ့အရှိန်ဟာမတူညီတာမို့ ၊
ဒီ moving subject ၂ ခု ကို
သင်က shutter speed ၁မျိုးထဲ့နဲ့ ၇ိုက်ယူကြည့်မယ်ဆိုပါစို့ ။
ထွက်လာတဲ့ image result ဟာဘယ်လိုမှကိုတူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ သင့်၏ရိုက်ကူးမှုတစ်ခုမှာ shutter speed ကိုဘယ်အတိုင်းအတာထားမလဲ ?
ဒီအဖြေကတော့ သင့်၏ subject ကအရှိန်မည်မျှရှိနေလဲ ?
သင်ကမည်မျှအတိုင်းအတာအထိ blur လိုခြင်တာလဲ ?
သင်က slow shutter speed ကိုသုံး၇တော့မဲ့အခြေနေဖြစ်နေပြီ။
( slow shutter speed / lounger shutter speed ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ light က camera ထဲကိုပိုဝင်တော့မှာလေ။ )
ပြသနာက lighting ကလဲလုံလောက်စွာရနေတဲ့အခြေအနေလဲဖြစ်နေပြန်တော့၊
ဒီအခြေအနေမှာသင် slow shutter speed နဲ့ ၇ိုက်လိုက်တဲ့ image ဟာ over exposed shot ဖြစ်တော့မှာသေခြာသလောက်ကိုဖြစ်ပြီပေါ့။
ဒီတော့ ဒါကိုဘယ်လိုထိန်းချူပ်လို့ ၇နိုင်မလဲ ?
camera ထဲကို အလင်းဝင်လာတဲ့ အပေါက်လေးကိုသေးလိုက်မယ်ဗျာ။
aperture ပေါ့ aperture size ကိုသေးလိုက်မယ်။
( smallar aperture = bigger number နော်။မမေ့နဲ့ အုံး )
shutter priority mode နဲ့ ရိုက်တာဆို၇င်တော့ သင်၇ဲ့camera ကသူတတ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် aperture size ကိုညှိသွားပေးပါလိမ့်မယ်။
camera image sensor ကို sensitive ဖြစ်စေသော ISO ကို decrease လုပ်ကြည့်မယ်ဗျာ။
higher number ဆို၇င် sensor က light ကို ပိုမို sensitive ဖြစ်စေပြီး၊
low number ဆို၇င်တော့ နဲနဲပဲ sensitive ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီတော့ low number ISO နဲ့try ကြည့်ကြလို့ ရပါတယ်။
Neutral Density Filter လို့ ခေါ်တဲ့ ND Filter ကိုသုံးကြည့်ကြမယ်။
အဲ့ဒီ filter လေးက သင့်၏ camera ထဲသို့lens ကနေဝင်လာမဲ့ light ကို cut down လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Polarizing Filter ဆိုတာလဲရှိပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီ filter အမျိုးအစားကတော့၊ light ကိုတင်မကပဲ reflection တို့ 
ကောင်းကင်ကြီးရဲ့ အရောင်ကိုပြောင်းစေတာတို့ 
အစရှိတဲ့ တစ်ခြားသော အခြေအနေတွေကိုပါ cut down လုပ်ပြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိထားသင့်ပါတယ်။
အောက်မှာကတော့ ဆရာ့ ဆရာကြီးများရိုက်ထားကြတဲ့
motion blur image တစ်ချို့ ပါ။
ကြည်ပြီးတော့ ရူးရူးပါကျပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ ... ။
ဘယ်လိုရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်ရှာမတွေ့ ပါဘူး။
Shutter Speed – 13 seconds ပါတဲ့။
Exposure – photographer estimates somewhere
between 30-40 minutes လို့ ရေးထားပါတယ်။
Exposure Time – 43 seconds
Shutter speed – 4/5 ofasecond
Shutter Speed – 50 seconds
50 second exposure time
Composition of3images at shutter speeds of between 1.6 seconds and 25 seconds
Shutter Speed – 8 seconds